Home News Dowladda Soomaaliya oo shaacisay in ay dishay Saraakiil katirsan Ururka Al Shabaab
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay in ay dishay Saraakiil katirsan Ururka Al Shabaab
Howlgal ay iska kaashadeen Ciidamada dowladda iyo Mareynkanka oo Ka dhacay Gobolka Shabeellaha hoose ayaa lagu dilay 25 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab.
Howlgalkan oo dhacay 16-ka bishan December lagana fuliyay nawaaxiga degaanka Gandershe ayaa lagu beegsaday xero ay lahaayeen Al-Shabaab, waxaana ay qorshaynaayeen weeraro ka dhan ah Ciidanka dowladda ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose sidda ay lagu sheegay war kasoo baxay dowladda Soomaaliya.
“Dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamiga ah waxaa Ka go’an in ay sii wadaan Dagaalka lagu wiiqayo awoodda Al-Shabaab oo Ku taagaan waxyeelaynta shacabka Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri warka.
Sidoo kale Milateriga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeymo ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drones-ka ay ku dileyn xubno ka tirsan Shabaabka ka dagaalama Soomaaliya.
War qoraal ah oo kasoo baxay taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo magacooda loo yaqaano AFRICOM ayaa lagu sheegay in Sideed xubnood oo ka tirsan Shabaab lagu dilay duqeyn ay ka fuliyeen Shalay meel ku dhaw deegaanka Gendershe ee Gobolka Shabeelada Hoose
Waxa kale oo warkaan lagu sheegay in duqeymahaasi aynan ku waxyeeloobin dad shacab ah, oo ay kaliya ku beegsadeyn xubnahaasi shabaab ka tirsanaa oo ay xogtooda heleyn, balse ma jiraan illo ka madax banaan oo xaqiijinaya sheegashadooda.
Previous articleWadooyinka ugu muhiimsan Magaalada Muqdisho oo xiran
Next articleUrurka Daacish oo sheegtay iney dileen xubno katirsan Al Shabaab